Thwebula Zello 1.73 – Vessoft
Zello – a software ukushintshanisa imiyalezo izwi. Isofthiwe kwenza ukuba babhale imiyalezo izwi bese uthumela kanyekanye ukuba nabanye abasebenzisi noma iqembu labantu. Zello ikuvumela ukuba ukuxhuma kuziteshi izwi umphakathi ihlukaniswe ngezihloko ezihlukene. Isofthiwe futhi kwenza ukuba adale imigudu avaliwe avikelwe iphasiwedi kanye ikhono zibeka imingcele yokukhulumisana izwi. Zello iqukethe inqwaba amathuluzi ukumisa umsindo, izaziso kanye display of ukwaziswa okudingekile.
Exchange of imibiko yezwi
A lot of amashaneli izwi
Yakhani amashaneli uvaliwe
Amathuluzi amaningi ngokwezifiso
Amazwana on Zello:
Zello Ahlobene software:
Abanye Iklayenti popular ukuze uthole imali virtual. Isofthiwe isebenzisa inethiwekhi ekhethekile ephephile ukudluliswa kwemali kanye nedatha ukubethela.